कांग्रेसको क्रि’याशील सदस्यता विवाद टुंगिएको दाबी, देउवालाई प्रतिवदेन बुझाइँदै ! – Nepal Online Khabar
भाद्र ६, २०७८ आइतबार 200
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद टुंगिएको नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यद्वय मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले क्रि’याशील सदस्यतामा
देखिएका विवाद समाधान गरेको दाबी गरेका छन् । भदौ ३ भित्र क्रि’याशील विवाद टुंग्याउनुपर्ने जिम्मेवारी लिएका उनीहरूले शनिबार बेलुकी विवाद टुंग्याएको जनाएका छन् । विवाद समाधान प्रतिवेदन आज अपराह्न ५ बजे सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको छ ।
बारा, सप्तरीलगायत छ जिल्लासहित एक सय वडामा रहेको क्रि’याशील सदस्यताका विवाद सहमति टुंग्याइएको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । क्रि’याशील सदस्यता विवादकै कारण पटक÷पटक सारिएको कांग्रेसको महाधिवेशन मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म गर्ने तय भएको छ ।
Prevअठ्ठाइस दिनकी छोरी बेचेर रक्सी पार्टी !
Nextकाबुलमा अमेरिकालाई आईएसको डर, आफ्ना नागरिकको सु’रक्षा विकल्प खोज्दै ।